कपाल पातलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? कागतीको रस कपालको हरेक समस्याको समाधान ! – Wow Sansar
January 10, 2021 67
काठमाडौँ । जाडो महिनामा कपालको हेरचाह गर्नु धेरैका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो । कपालको स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको छ । त्यसैले कपालको ख्याल गर्नु पनि अन्य शारीरिक अंगको स्वास्थ्यबारे ख्याल राख्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण भएको छ ।आफ्नो कपाललाई स्वस्थ र मजबुत बनाउने बारेमा व्यक्तिहरू प्रायः चिन्तित हुन्छन् । धेरै प्रयासपछि पनि कपालको सुरक्षामा प्रभाव नदेखिनु धेरैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कपाल स्वस्थ राख्न र उनीहरूलाई चम्किलो र बलियो बनाउनको लागि हामीले आफ्नो कपालको स्वास्थ्यको बारेमा जान्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । हो, सामान्यतया जब व्यक्तिहरूले आफ्नो कपालमा केही चीज लगाउँदछन्, उनीहरूसँग कपालको स्वास्थ्यका बारेमा कुनै खास जानकारी हुँदैन ।तपाईंले आफ्नो कपालको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी नलिएसम्म यसलाई हामी स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
विभिन्न किसिमले कपालको स्याहार गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कपालको प्रकृति हेरेर सोही अनुसार यसको स्याहारको खाका बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि कपालको प्रकृति कस्तो छ रु भन्ने कुरालाई ध्यान दिन सकिन्छ ।
धेरै व्यक्ति आफ्नो पातलो कपालको समस्याबाट चिन्तित छन् । जसको कारणले तपाईले कपाल झर्ने समस्याबाट पार गर्नुपर्छ । तपाईंको पातलो कपाल के कारणले भएको हो भन्ने कुरा पहिले यकिन गर्नुपर्छ । यो समस्याको पहिचानपछि मात्रै समस्याबाट हामीले मुक्ति पाउन सकिन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
पातलो कपाल पोषणको कमी, हार्मोनल परिवर्तन र तनावको कारणले हुने गर्छ । यी विभिन्न कारणहरू सबैलाई हुन्छ । यसको लागि तपाईंले चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु आवश्यक छ ।कपालका समस्याहरू टाउकोबाट पनि हुन्छन्, कपाल स्वस्थ राख्नका लागि कपालको जरालाई स्वस्थ राख्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । छाला चिलाउने समस्या तपाईंको मात्र नभएर धेरै व्यक्तिको साझा समस्या हो । जसका कारणले उनीहरू दिनभर आफ्नो कपाल र टाउको कन्याइरहन्छन् । यस प्रकार चिलाउने समस्या तपाईंको टाउकोमा बढी तनाव र रूखोपनका कारण हुने गर्छ । तपाईंले आफ्नो कपाल वा टाउकोलाई लामो समयसम्म सुख्खा हुन दिनुहुन्न । यसले तपाईंको कपाललाई बिगार्न सक्छ । यसका लागि तपाईंले नियमित तेलमा मसाज गर्नुपर्छ र सकेसम्म धेरै पानी पिउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
हिउँदमा कपालको सही रेखदेख गर्नु अलिक गाह्रो काम हो । सबैजना सुन्दर कपाल चाहन्छन् । त्यसको लागि कागतीको रस प्रभावकारी हुन सक्छ ।१० ग्राम नरिवलको पानी १० ग्राम कागतीको रसमा मिलाएर कपालमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् । ४०–४५ मिनेटपछि पानीले कपाल सफा गर्नुहोस् । केही महिना एवंरितले कपाल सफा गर्नाले कपाल झर्नबाट रोकिन्छ । यस प्रकारले कपालमा कागती लगाउँदा कपाल लामो र गाढा पनि हुन्छ । यसबाहेक पनि अन्य विविध समस्या समाधान गर्नको लागि कागतीको रस उपयोगी हुन सक्छ ।
Prevपशुपतिनाथको मन्दिर फेरि बन्द, यस्तो छ कारण !
Nextपाथिभरा माताको दर्शनगरी पुष २७ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस्
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6760)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3328)